Imibuzo evame ukubuzwa - Beijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd.
Yebo, singanikeza ngemibhalo eminingi kubandakanya nemibhalo yokuthekelisa lapho kudingeka khona.
30% idiphozi kusengaphambili, 70% esele ngaphambi kokulayisha isitsha.
Yebo, sihlala sisebenzisa ukupakisha ukuthekelisa kwekhwalithi ephezulu. Ukupakisha kwe-Sspecialist nezidingo zokupakisha ezingajwayelekile kungahle kube nenkokhelo eyengeziwe.
Izindleko zokuthumela zincike ebuningini nasendleleni okhetha ngayo ukuthola izimpahla. I-Express imvamisa iyindlela eshesha kunazo zonke kepha futhi ebiza kakhulu. Nge-seafreight yisisombululo esihle kakhulu semali enkulu. Amanani ezimpahla ngqo singakunika wona uma sazi imininingwane yenani, isisindo nendlela. Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane.